रोचक संसार – .:: Welcome to Saurahaonline.com |
विश्वकपको फाइनल खेलमा मैदानमा छिर्ने यी यूवती पाईन यस्तो सजाए ५ श्रावण २०७५, शनिबार १२:१४
फिफा विश्वकपको फाइनल खेल भइरहेका बेला मैदानमा छिर्ने रुसकी महिला संगठन Pussy Riot का चार सदस्यलाई १५ दिनसम्मका लागि जेलमा राखिएको छ । यसका साथै यो संगठनमाथि कुनै पनि स्टेडियममा खेल हेर्नका लागि तीन वर्षको प्रतिबन्धको लगाइएको छ । संगठनले..
जब रातभरी ३२ किमि हिँडेर पहिलो दिन अफिस पुगेः मालिकले उपहारमा दिए नयाँ कार (भिडियो)
न्यूयोर्क । अमेरिकाको एक कम्पनीका मालिकले ३२ किलोमिटर पैदल हिँडेर अफिस पुग्ने आफ्ना एक कर्मचारीलाई नयाँ कार उपहारस्वरुप प्रदान गरेका छन् । वाल्टर कारको आफ्नो कार बिग्रिएका कारण उनी रातभरी हिँडेर अफिसमा पहिलो दिन उपस्थित भएका थिए । अफिस..
जब तामझाम सहित जन्ती लिएर बिहे गर्न गएका दुलाहा एक्लै फर्किए… ४ श्रावण २०७५, शुक्रबार १२:३२
दमौली, ४ साउन । व्यास नगरपालिका–१२ कमलाबारीका ३० वर्षीय अशोक राना आइतबार ठाँटिएर दमौलीको दुर्गा मन्दिर आइपुगे । उनीसँगै आफन्तको लावालस्कर पनि थियो । नवदुलाहाको भेषमा ढाकाको दौरा सुरुवाल लगाएका राना दुलाहा भएकोमा कुनै शंका थिएन । दुर्गा..
जब मृत्यु भएको १० दिनपछि महिलाले बच्चा जन्माएपछि……. २ श्रावण २०७५, बुधबार १३:५०
एजेन्सी, एक महिलाले मृत्यु भएको १० दिनपछि बच्चालाई जन्म दिएकी छिन् ।डेली मेलका अनुसार दक्षिण अफ्रिकाको दक्षिणी–पूर्वी केप प्रान्तस्थित थायिसी गाउँकी ३३ वर्षीया नोम्भेलिसो नोमासोन्तो एम्दोयीले आफूलाई एकाएक सास फेर्न समस्या भएको बताएकी थिइन्..
हेर्नुहोस् रसिया विश्वकप फाइनलको रोचक दृष्य, जुन टेलिभिजनमा लाइभ देखाईएन ३२ असार २०७५, सोमबार १३:१४
रसिया ३२ असार ।रसिया विश्वकपको फाइनलमा धेरै नेपालीहरुको सहानुभूति समर्थन क्रोएसियालाई थियो। फ्रान्स सशक्त टिम थियो नै। नभन्दै फ्रान्सले ४-२ को अन्तरले फाइनल जितेर विश्वकप घर लाने भयो। यो विश्वकपको फाइनलमा गजबै भयो। आत्मघाती गोल पनि..
अचम्म खुर्सानी खानेले २४ क्यारेट सुनको सिक्का पाउने ३१ असार २०७५, आईतवार १६:०४
एजेन्सी । चीनमा हुने अनेक थरी प्रतियोगितामध्ये खुर्सानी खाने अनौठो प्रतियोगिताले अहिले फेरी ब्यापक चर्चा पाएको छ । चीनको हुनान प्रान्तमा यस्तै एक रोचक प्रतियोगिता भइरहेको छ जहाँ भाग लिन जोकोहीले हिम्मत जुटाउन गाह्रो पर्दछ । खुर्सानी खाने..
यस्ता लक्षण जुन जीवनमा ठूला घटना घट्ने सक्ने संकेत हुन्
काठमाडौँ, ३१ अुसार । ज्योतिष शास्त्रले भविष्यमा हुने घटनामा वर्तमान क्रियाकलाप र घटनाले समेत प्रभाव पार्ने बताउँछ । कतिपय भविष्यमा हुने घटनाका लक्षणहरु अगाडी नै देखिने समेत ज्योतिष शास्त्रको दावी छ । भविष्यमा ठूला घटना हुँदा देखिने संकेत..
तीन महिनापछि आफ्नै हजुरबासँग बिहे गरेको थाहा भएपछि…. ३० असार २०७५, शनिबार १३:००
काठमाडौँ, ३० असार । कहिलेकाहीँ जीवनमा अनेक संयोगहरु हुने गर्छन् । तर कतिपय संयोग यस्ता पनि हुन्छन्, जो मानिसले कल्पनासम्म गरेका हुँदैनन् ।यस्तै भएको छ, अमेरिकाको फ्लोरिडा बस्ने २४ वर्षीया एक युवती र ७८ वर्षका बृद्धलाई । ७८ वर्षको उमेरमा एकजना..
काठमाडौ,३० असार । एकजना चिकित्सकले गर्भाधारणको समस्या लिएर आउने आफ्ना बिरामीलाई वीर्य परीक्षण गर्ने बाहानामा झुक्काएर आफ्नै वीर्य दिइ ६० सन्तानको बाबु बनेको खुलासा भएको छ । सन् १९८० देखि २००९ सम्म नेदरल्यान्ड्सको ‘फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट..
सिमकोट, हुम्ला ३० असार । । सुन्दा पत्याउन कठिन हुन्छ तर यहाँ बोको र भाले चढाउने सर्तमा सडक र ढल निर्माण हुँदैछ । सिमकोट गाउँपालिका(६ को लादेबाडादेखि कालीचोकसम्मको ढल तथा चार मिटर चौडा सडक निर्माणको मुखैमा देउताको पूजा गर्ने ९थान० परेपछि..
चितवन, ५ साउन । भूकम्पपछि जोखिम क्षेत्र पहिचान भएका ५२ घर भूकम्पपीडितको स्थानान्तरण गरिँदै छ ।राष्ट्रिय..
नेवा महिला बचत कोषको साधारणसभाद्वारा नाम परिवर्तन
चितवन, ०५ साउन । चार वर्ष अगाडि भरतपुर १२ मा सञ्चालनमा आएको नेवा महिला बचत कोषले चौथो साधारणसभाबाट नाम..
जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारले नयाँ शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दैछ : प्रधानमन्त्री
, ५ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्धिको खाका अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारले नयाँ शिक्षा..
आनन्द पोखरेल चितवन, ०५ साउन । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण साइबर अपराध बढ्दै गएकोमा सरोकारवालहरुले..
चितवन, ५ साउन । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयले रु.एक अर्ब ४९ करोड ५१ लाख चार हजार राजश्व संकलन..